Ikhosi ye-PTC CREO yeParametric Course-Uyilo, ii-Ansys kunye nokulingisa (3/3) -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-PTC CREO yeParametric Course-Uyilo, iimpendulo kunye nokulingisa (3/3)
UCreo sisisombululo se-3D CAD esikunceda ukukhawulezisa ukuveliswa kwemveliso ukuze ukwazi ukwenza iimveliso ezingcono ngokukhawuleza. Kulula ukufunda, uCreo uyakuthatha ngaphandle komthungo ukusuka kwinqanaba lokuqala loyilo lwemveliso ngokuvelisa nangaphaya.
Ungadibanisa ukusebenza okunamandla nokungqinelanayo kunye neetekhnoloji ezintsha ezinje ngoyilo lokuvelisa, inyani eqinisekisiweyo, ukulingisa kwexesha lokwenyani, kunye nemveliso eyongezelelweyo. kunye ne-IoT ukukhawulezisa ngokukhawuleza, ukunciphisa iindleko, kunye nokuphucula umgangatho wemveliso. Ihlabathi lophuhliso lwemveliso lihamba ngokukhawuleza, kwaye kuphela nguCreo onikezela ngezixhobo eziguqukayo ozifunayo ukuze wenze ukhuphiswano kwaye ufumane isabelo sentengiso. Ikhosi ibandakanya: Uhlalutyo lwe-Truss, i-Bridge Beam, i-Vibration Dampening, i-Cantilever Beam, i-C Channel, i-Friction Effects, i-Projectile Motion, i-Thermal Analysis.
Uhlalutyo lwe-Element Element Usebenzisa ii-Beams, iibhlorho, iTruss, iC-Channel, kunye nolwakhiwo olufanayo
Ulwazi olusisiseko lwesoftware yeCAD
Abathandi beCAD / BIM
Iikhosi-Imveliso yobomi beMveliso Iikhosi ze-CREO zeParametric Iikhosi zoYilo zoMatshini
Gqibezela ikhosi yeMicrosoft PowerPoint
Ikhosi yeMicrosoft Excel-iNqanaba eliPhakathi (2/2)
Inkqubo yoLwakhiwo lweMasonics nge-ETABS-Imodyuli 6